Bangiga cusub ee Iftin oo laga furay caasimada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusinessBangiga cusub ee Iftin oo laga furay caasimada Puntland
July 27, 2016 Puntland Mirror Business, Puntland, Somalia 0
Dhismaha bangiga Iftin ee Garoowe.
Garoowe-(Puntland Mirror) Bankiga Iftin ayaa xarun weyn ka furtay caasimada Puntland, Garoowe maanta oo Arbaco ah.
Xaflada furitaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, wasiiro, xildhibaano iyo ganacsado.
Madaxweynaha Puntland ayaa si rasmiya xariga uga jaray dhismaha cusub ee bangiga Iftin.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay xaflada furitaanka bangiga cusub ee Iftin, Garoowe.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa ku tilmaamay in bangiga cusub ee Iftin uu shaqo abuuris u samayn doono dhalinyarada waxbartay ee reer Puntland.
Cabdiweli ayaa ku booriyay maamulka bangiga Iftin in ay soo kordhiyaan adeegyo dheeraad ah oo dalka looga baahanyahay iyo in ay xiriir la yeeshaan bangiyada caalamiga ah.
Puntland iyo gobolada kale ee Soomaaliya wali kama jiro bangi caalami ah oo la shaqyn kara bangiyada caalamka, dhamaan xawaaladaha iyo bangiyada dalka ka jira waxa ay akoomo gaar ah ku leeyihiin bangiyo ajnabi .
October 18, 2016 Shirkada Amal Group oo soo kordhisay shirkad isgaarsiineed